Android အတွက် DevCheck Hardware နှင့် System Info APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » DevCheck ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် System ကိုအင်ဖို
DevCheck ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် System ကိုအင်ဖို APK ကို
အစစ်အမှန်အချိန်၌သင်တို့၏ဟာ့ဒ်ဝဲစောင့်ကြည့်နှင့်သင့် device ကိုမော်ဒယ် CPU ကို, GPU ကို, မှတ်ဉာဏ်, ဘက်ထရီ, ကင်မရာ, disk ကို, ကွန်ယက်, အာရုံခံကိရိယာများနှင့် operating system အကြောင်းပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ရ။ DevCheck သင်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိကျမှုနှင့်စနစ်တကျလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် operating system အကြောင်းလိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုပေးသည်။
DevCheck ရရှိနိုင်အရှိဆုံးအသေးစိတ် CPU နဲ့ System ကို-on-a-chip ကို (SoC) အချက်အလက်ပေးပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကိုအတွက် Bluetooth, GPU ကို, RAM ကို, သိုလှောင်မှုနှင့်အခြား hardware အတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ dual-SIM ကိုအင်ဖိုအပါအဝင်သင့်ရဲ့ Wi-Fi နှင့်မိုဘိုင်းကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်. အပေါငျးတို့သအသေးစိတ်ကိုရှာပါ။ အစစ်အမှန်အချိန်အာရုံခံကိရိယာဒေတာကိုရယူပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ operating system နဲ့ဗိသုကာအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
DevCheck အာရုံခံကိရိယာအရွယ်အစား, pixel အရွယ်အစား, ကို aperture, focal length, က ISO range ကို, RAW စွမ်းရည်, မကျြနှာကိုထောက်လှမ်း, 35mm equivalents နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ကင်မရာသတ်မှတ်ချက်များ, ပြသ
dashboard ကို: CPU နဲ့ GPU ကိုကြိမ်နှုန်း၏ Real-time စောင့်ကြည့်မှု, အပူချိန်, မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု, ဘက်ထရီစာရင်းအင်း, နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပွင့်နေချိန်။ နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအတွက် CPU ကိုအကြိမ်ရေအသုံးပြုမှုနှင့်အချိန်တစ် sortable အကျဉ်းချုပ်များအတွက် CPU ကိုလှိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းများအတွက်အပူချိန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါဒိုင်ခွက်ပေါ်မှာဖော်ပြရန်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဟာ့ဒ်ဝဲ: ချစ်ပ်အမည်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ဗိသုကာ, Processor ကို cores နှင့် big.LITTLE configuration များ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်လှိုင်း, အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားနှင့် bandwidth ကိုအပါအဝင်သင့်ရဲ့ SoC, CPU, GPU ကို, မှတ်ဉာဏ်, သိမ်းဆည်းခြင်း, ဘလူးတုသ်နှင့်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်းကိုအားလုံးအသေးစိတ်, ပြသထားပြီး, သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် , Resolution, OpenGL နှင့် panel ကိုအမျိုးအစား။ တချို့ကသတင်းအချက်အလက်အမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်သည်။
System ကို: ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး, အမှတ်တံဆိပ်, ထုတ်လုပ်သူ, Bootloader ကို, ရေဒီယို, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, device ကိုအိုင်ဒီ Android ဗားရှင်း, လုံခြုံရေး patch ကိုအဆင့်နှင့် kernel ကိုအပါအဝင်သင့်ရဲ့ device ကိုအကြောင်းကိုအားလုံးအချက်အလက်, ရယူပါ။ DevCheck လည်းအမြစ်, ထိုအခါ Busy Box, Knox status ကိုများနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဘက်ထရီ: သင့်ရဲ့ဘက်ထရီအခြေအနေ, အပူချိန်, အဆငျ့, နည်းပညာ, ကျန်းမာရေး, ဗို့အား, လက်ရှိနှင့်စွမ်းရည်အကြောင်းကို Real-time အချက်အလက်
Network မှ: သင့်ရဲ့ Wi-Fi နှင့်မိုဘိုင်း / IP လိပ်စာများ (ipv4 နှင့် ipv6) အပါအဝင်ဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှု, ကွန်နက်ရှင်အချက်အလက်, အော်ပရေတာ, ဖုန်းနံပါတ်, ဖုန်းနှင့်ကွန်ယက်အမျိုးအစား, အများပြည်သူအိုင်ပီနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုအချက်အလက်ပြသထားတယ်။ ရရှိနိုင်အများစုမှာပြည့်စုံ dual-SIM ကိုသတင်းအချက်အလက်
Apps ကပ: အားလုံးသင့်ရဲ့ apps များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ apps များ running လက်ရှိမှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ run နေ apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းပေးစွမ်းသည်။ အန်းဒရွိုက် Nougat တွင်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုအမြစ်တွယ်ကိရိယာများပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နှင့်နောက်ကျောကင်မရာအဘို့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: resolution ကို (-megapixels), အာရုံခံကိရိယာအရွယ်အစား, pixel အရွယ်အစား, က ISO range ကို, RAW စွမ်းရည်, ကို aperture, focal length, သီးနှံအချက်, အမြင်လယ်ပြင်, Modes သာအာရုံစူးစိုက်, flash ကို Modes သာ, JPEG, အရည်အသွေးနှင့်ပုံရိပ်ကို format နဲ့, max ကိုမျက်နှာ ရေတွက်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မကျြနှာကိုထောက်လှမ်းသည် modes
sensors: အမျိုးအစား, ထုတ်လုပ်သူ, ပါဝါနဲ့ resolution အပါအဝင် device ကိုပေါ်မှာရှိသမျှအာရုံခံကိရိယာ၏စာရင်းကို။ Accelerometer, ခြေလှမ်း detector, gyroscope, နီးကပ်, အလင်းနှင့်အခြားအာရုံခံကိရိယာများအတွက်ရီးရဲလ်အချိန်ဂရပ်ဖစ်အင်ဖို။
Pro ဗားရှင်း In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်ရရှိနိုင်
အဆိုပါလိုလားသူဗားရှင်းလုံးဝစိတ်ကြိုက်, ရွှေ့ပြောင်းအမြဲ-on-ထိပ်တန်း floating မော်နီတာပါဝင်သည်။ ဒါဟာသင်နဲ့အခြား app တွေကိုသုံးနေစဉ်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက် CPU ကိုကြိမ်နှုန်း, အပူချိန်, GPU ကိုအကြိမ်ရေ, ဘက်ထရီ, ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှု, signal ကိုခွန်အားကို memory နဲ့ system ကိုဝန်စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အပေါ်ယံလွှာပြတင်းပေါက်၏အရွယ်အစား, လင်းမြင်သာမှုနှင့်အနေအထားကိုလုံးဝချိန်ညှိသည်။ အထက်က Android 5.0 နှင့်ရက်နေ့တွင် floating မော်နီတာအဆင်ပြေသည့် statusbar မှဆိုက်ကပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လည်းမရရှိနိုင်တစ်ဦးကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်-မှတဆင့် option ကို။
အဆိုပါလိုလားသူဗားရှင်းသင်တို့ကိုလည်းအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း themes များအကြားအကူးအပြောင်းနှင့်ကိုးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အစီအစဉ်များ (ပယင်း, အပြာ, slate မီးခိုးရောင်, ကို Aqua, အနီ, အစိမ်း, လိမ္မော်ရောင်, ပန်းရောင်နှင့်မဲနယ်) ကနေရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြု
ဒီ app ကိုသင့်ရဲ့ device တွေအကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်အများအပြားခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမသင့်ရဲ့ device ထွက်ခွာမည်။ ဤအချက်အလက်ကိုမဆိုလမ်းအတွက် shared သို့မဟုတ်ကောက်ယူမပေးပါ။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုအစဉ်အမြဲလေးစားသည်။
ပိုပြီး devices များ -support
DevCheck ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် System ကိုအင်ဖို
4.98 ကို MB